Nin 20 sano jir ayaa loo qabtay rasaaseyntii Göteborg - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Linn Ohlsson/P4 Sveriges Radio Göteborg
Nin 20 sano jir ayaa loo qabtay rasaaseyntii Göteborg
La daabacay tisdag 10 september 2013 kl 16.50
Nin 20 sano jir ah oo deggan xaafadda Hammarkullen ee degmada Göteborg ayaa maanta gelinkii hore boliiska soo qabteen si waraysi loo la yeesho. Ninkaana hadda weli waa la sii hayaa oo waxaa lagu tuhunsan yahay isku day dil.
Waxay ahayd jimcihii la soo dhaafay saacaddu markay ahayd sagaalkii iyo barkii fiidnimo kolkii uu qaylodhaan ku saabsan rasaas la riday lagu soo sheegay fagaaraha Hammarkulletorget. Waxaa halkaas lagu dhaawacay nin da’diisu tahay labaatameeyadii, laakiin dhaawaca soo gaaray ma ahan mid halis ah. Ninkanina ma ahan nin uu boliisku horay u yaqaanney.
Afhayeenka saxaafadda ee boliiska Björ Blixter oo ninka hadda la hayo ka warramaya ayaa yiri:
- Ninkaan hadda la hayo isagoo maqan ayaa lagu thunsanaa in uu ka dambeeyey toogashadii dhacday 6dii sebteember. Maanta gelinkii hore ayuuna boliiska soo kaxeeyey si wareysi loola yeesho. Waana nin dhallinyaro ah oo mar dhoweyd buuxsadey 20 sano jir, deggana isla xaafadda.